Ngaba Ukuqonda Kakuhle Ukubekw’ Esweni NguYehova? | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Amehlo kaYehova akuzo zonke iindawo, ahlala ekhangele ababi nabalungileyo.”—IMIZE. 15:3.
Kutheni uYehova ekubek’ esweni?
UYehova ukulumkisa, akulungise aze akukhokele njani?
Kutheni maxa wambi uYehova engangeneleli kwiingxaki esijamelana nazo?
1, 2. Ukusibek’ esweni kukaYehova kwahluke njani kwiikhamera ezisetyenziswa ngabasemagunyeni?
KUMAZWE amaninzi, abasemagunyeni baye bafakela iikhamera ukuze babone iimoto ezihamba endleleni kunye neengozi. Xa kunokubakho imoto etshayisa umntu ohamba endleleni ize ibaleke, ezi khamera zinokuba luncedo ekubanjweni komqhubi wayo. Ukufakelwa kwezi khamera kuyo yonke indawo kwenza kube nzima ngabantu ukuphepha imiphumo yezenzo zabo.
2 Noko ke, ngaba ukusetyenziswa kwezi khamera kumele kusikhumbuze indlela uBawo wethu osithandayo, uYehova, aqhubana ngayo nathi? IBhayibhile iyatsho ukuba amehlo akhe “akuzo zonke iindawo.” (IMize. 15:3) Kodwa ngaba oku kuthetha ukuba usoloko esigade kuyo yonke into esiyenzayo? Ngaba uThixo usibek’ esweni kuba nje efuna ukusinyanzela ukuba sithobele imithetho yakhe, aze asohlwaye xa singayithobeli? (Yer. 16:17; Heb. 4:13) Akunjalo! UYehova usibek’ esweni kuba esithanda yaye efuna siphumelele.—1 Pet. 3:12.
3. Siza kuthetha ngaziphi iindlela ezintlanu uThixo asibonisa ngazo ukuba uyasithanda?
3 Yintoni eza kusinceda siqonde ukuba uThixo usibek’ esweni kuba esithanda? Makhe sibone ukuba ukwenza njani oku. Ukwenza (1) ngokusilumkisa xa siqalisa ukuba notyekelo olubi, (2) ngokusilungisa xa sisenza impazamo, (3) ngokusikhokela esebenzisa imigaqo ekwiLizwi lakhe, (4) ngokusinceda xa sijamelene neengxaki, (5) nangokusivuza xa ebona sisenza okuhle.
4. Yayiyintoni injongo kaYehova yokulumkisa uKayin ngesono ‘esasibuthume ngasesangweni’?
4 Okokuqala, makhe sibone indlela uThixo asilumkisa ngayo xa siqalisa ukuba notyekelo olubi. (1 Kron. 28:9) Ukuze siyiqonde kakuhle le ndlela kaThixo yokusibek’ esweni, makhe sicinge ngendlela awaqhubana ngayo noKayin, ‘owavutha kakhulu ngumsindo’ xa umbingelelo wakhe ungazange wamkelwe nguThixo. (Funda iGenesis 4:3-7.) UYehova wabongoza uKayin ukuba ‘aguquke aze enze okulungileyo.’ Wamlumkisa esithi xa engaguquki, kwakukho isono ‘esibuthumileyo ngasesangweni.’ UThixo wambuza: “Ngaba wena uya kusongamela na?” Wayefuna uKayin aphulaphule isilumkiso aze ‘aphakanyiswe.’ Ukuphulaphula isilumkiso kwakuya kumnceda abe nolwalamano oluhle noThixo.
5. UYehova usilumkisa njani?
5 Kuthekani ngathi namhlanje? Amehlo kaYehova agqobhoza aye kutsho kwiintliziyo zethu; asinakumfihlela iingcinga neminqweno esinayo. UBawo wethu osithandayo ufuna sihambe endleleni yobulungisa; sekunjalo, akasinyanzeli ukuba sitshintshe iindlela zethu. Esebenzisa iLizwi lakhe, iBhayibhile, uyasilumkisa xa sihamba ngendlela etenxileyo. Njani? Xa sifunda iBhayibhile yonke imihla, siye sifumane iivesi ezisinceda silwe notyekelo lokwenza isono. Ukongezelela, iincwadi zethu ezisekelwe eBhayibhileni zinokusinceda sikwazi ukucombulula ingxaki esinayo. Kwiintlanganiso zebandla, sonke siye sifumane iziluleko ezifika ngexesha elifanelekileyo!
6, 7. (a) Kutheni sinokuthi iincwadi ezibhalelwe izigidi zabantu zibonisa ukuba uThixo uthanda ngamnye wethu? (b) Yintoni omele uyenze ukuze izilumkiso zikuncede?
6 Zonke ezi zilumkiso zibubungqina bokuba uYehova uthanda yaye ubeke esweni ngamnye wethu. Ewe kona, iBhayibhile inamakhulu eminyaka ikhona, iincwadi ezibhalwa yintlangano kaThixo zibhalelwe izigidi zabantu, ibe neziluleko esizifumana kwiintlanganiso zibhekiswe kwibandla lonke. Sekunjalo, kuzo zonke ezi meko, uYehova unceda wena uqonde iLizwi lakhe ukuze ulwe notyekelo lwakho. Ngoko ke sinokutsho ukuba oku bubungqina bokuba uYehova uyakuthanda.
Isazela sethu esiqeqeshwe yiBhayibhile sisinceda sikwazi ukuphepha iingozi (Funda isiqendu 6, 7)
7 Ukuze izilumkiso zikaThixo zisincede, simele siqale sazi ukuba usixhalabele. Emva koko, simele siliphulaphule iLizwi lakhe, size sizimisele ukukhupha naziphi na iingcinga angazifuniyo uThixo. (Funda uIsaya 55:6, 7) Ukuba siyaziphulaphula izilumkiso esizifumanayo, siya kuyiphepha imiphumo ebuhlungu. Kodwa kuthekani ukuba siyanikezela kwiingcinga ezimbi? UBawo wethu osithandayo unokusinceda njani?
UBAWO WETHU OSIKHATHALELEYO UYASILUNGISA
8, 9. Iziluleko esizifumana kuYehova esebenzisa abakhonzi bakhe zibonisa njani ukuba usikhathalele? Zekelisa.
8 Enye indlela esinokubona ngayo ukuba uYehova usikhathalele kuxa esilungisa. (Funda amaHebhere 12:5, 6.) Ewe kona, akumnandanga ukululekwa okanye ukuqeqeshwa. (Heb. 12:11) Kodwa masikhe sizibeke ezihlangwini zalo mntu usilulekayo. Umel’ ukuba uyabona ukuba into esiyenzayo inokubeka ulwalamano lwethu noYehova uThixo engozini, usixhalabele yaye ukulungele ukuzipha ixesha nokwenza umgudu ukusibonisa indlela esinokumkholisa ngayo uThixo esebenzisa iBhayibhile. Unokuyicinga ke indlela asixhalabele ngayo uYehova, lowo sisuka kuye esi siluleko.
9 Makhe sibone umzekelo wendlela ukululekwa ngumntu okusibonisa ngayo ukuba uThixo usixhalabele. Omnye umzalwana wayebukela iphonografi ngaphambi kokuba angene enyanisweni, kodwa wakwazi ukulwa naloo mkhwa. Noko ke, iingcinga zalo mkhwa zazisamthe mbende. Xa wathenga iselfowuni entsha, umnqweno wokubukela iphonografi wavuseleleka. (Yak. 1:14, 15) Wasebenzisa le fowuni ukungena kwi-Intanethi ukuze abukele la manyala. Ngenye imini, xa wayeshumayela ngefowuni, waboleka omnye umdala ifowuni yakhe ukuze akhangele iinombolo zabantu. Wathi lo mdala esayisebenzisa le fowuni, kwasuka kwavela iiwebhsayithi zephonografi. Oku kwaba yintsikelelo kulo mzalwana unalo mkhwa mbi. Walulekwa, wasamkela eso siluleko, waza ekugqibeleni wawuyeka lo mkhwa wakhe. Isivuyisa ngokwenene into yokuba, uBawo wethu osikhathaleleyo ebona nezono zethu ezifihlakeleyo aze asilungise singekayi kude!
KUYASINCEDA UKUPHILA NGEMIGAQO YEBHAYIBHILE
10, 11. (a) Sinokuwafuna njani amacebiso kuThixo? (b) Enye intsapho yancedwa njani kukulandela amacebiso avela kuYehova?
10 Umdumisi wathi kuYehova: “Uya kundikhokela ngecebo lakho.” (INdu. 73:24) Nanini na sifuna icebiso kwinto ethile, ‘sinokumgqala’ uYehova ngokulikhangela kwiLizwi lakhe. Ukuphila ngemigaqo yeBhayibhile akupheleli nje ekusincedeni sisondele kuThixo, kodwa kusinceda nakwiingxaki zemihla ngemihla.—IMize. 3:6.
11 Omnye umzekelo osinceda sibone indlela uYehova asikhokela ngayo ngamava omzalwana owayeqeshe ifama kwingingqi yaseMasbate kwiiPhilippines. Yena nomfazi wakhe bangoovulindlela abathe ngxi ngoxa bekhulisa intsapho enkulu. Ngenye imini, bothuka bakufumana ileta kumntu abaqeshe kuye ethi mabaphume baphele. Kwakutheni? Babetyholwe ngokunganyaniseki. Nakuba lo mzalwana wayexhalabele intsapho yakhe ezibuza ukuba baza kuhlala phi, wathi: “UYehova uza kusinceda. Uhlala esinyamekela.” Elo themba lakhe lalingelolize. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko, le ntsapho yavuya isakuva ukuba ayisagxothwa. Kwakwenzeke ntoni? Umnini fama wabona ukuba le ntsapho iphila ngemigaqo yeBhayibhile ibe isamhlonela nakuba ityholiwe. Oku kwamchukumisa kangangokuba wada wayinika umhlaba ongakumbi. (Funda eyoku-1 kaPetros 2:12.) UYehova uyasinceda esebenzisa iLizwi lakhe ukuze sikwazi ukumelana neengxaki zobomi.
UMHLOBO OSINCEDA SINYAMEZELE
12, 13. Ziziphi iimeko ezinokwenza uthandabuze ukuba uThixo uyakubona ukubandezeleka kwakho?
12 Maxa wambi kukhe kubekho iingxaki ezibonakala zingenasicombululo. Sisenokuba nesigulo esinganyangekiyo, sichaswe zizalamane okanye sitshutshiswe. Enye yezinto ekunzima ukuzinyamezela kuxa kukho umntu oxabene naye ebandleni.
13 Kusenokwenzeka ukuba ukhathazwe yinto ethethwe ngomnye umntu. Usenokude uthi: ‘Into enje ibingamelanga kwenzeka kwintlangano kaThixo!’ Sekunjalo, lo mzalwana ufumana amalungelo angakumbi ebandleni ibe uyathandwa ngabanye abazalwana noodade. Unokuzibuza: ‘Yenzeka njani le nto? UYehova akayiboni bethu? Uza kuthula nje ayibukele?’—INdu. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.
14. Sisiphi esinye sezizathu ezinokwenza uYehova angangeneleli xa kukho umzalwana osilulekayo?
14 UYehova usenokungangeneleli, kuba enezizathu ezivakalayo. Ngokomzekelo, sisenokululekwa ngomnye umntu ize loo nto isikhathaze, kuba sisithi akukho nto siyenzileyo. Kodwa uThixo usenokuba akaboni ngaloo ndlela. Kusenokwenzeka ukuba eso siluleko besisifanele. Kwibali lobomi bakhe, uMzalwana uKarl Klein, owayelilungu leQumrhu Elilawulayo, ubalisa ngesihlandlo awafumana isiluleko esingqalileyo kuMzalwana uJ. F. Rutherford. Kamva, uMzalwana uRutherford wabulisa uMzalwana uKlein ngobubele wathi: “Molo, Karl!” Noko ke, esaqunjiswe sesaa siluleko, uMzalwana uKlein waphendula ngoMolo obandayo. Ebona ukuba uMzalwana uKlein uqumbile, uMzalwana uRutherford wathi kuye: “Lumka. USathana usemva kwakho.” Kamva, uMzalwana uKlein wabhala wathi: “Xa siqumbela umzalwana, ngakumbi xa simqumbela kuba ethethe into anegunya lokuyithetha, siba sesichengeni sokuba zizisulu zikaMtyholi.” *
15. Yintoni enokukunceda ungaphelelwa ngumonde xa ulinde ukuba uYehova akuncede ukwazi ukunyamezela ingxaki ethile?
15 Sekunjalo, sinokuphelelwa ngumonde xa sibona ngathi ingxaki ethile ayipheli. Singakwazi njani ukunyamezela? Masithi uhamba ngemoto kwindlela ephithizelayo uze ubambezeleke. Akwazi ukuba uza kulinda ixesha elingakanani. Ukuba uyakruquka uze uzame ukuhamba ngenye indlela, usenokulahleka uze ugqibele sele uthatha ixesha elide ngakumbi kunokuba bekuya kuba njalo ukuba ubuye walinda ngomonde. Ngendlela efanayo, ukuba unamathela kwiindlela ezichazwe kwiLizwi likaThixo, ekugqibeleni uya kuphumelela.
16. Yintoni enye enokwenza uYehova angakhawulezi asincede xa sisengxakini?
16 UYehova usenokungakhawulezi asincede xa sisengxakini kuba efuna ukusiqeqesha. (Funda eyoku-1 kaPetros 5:6-10.) Oku akuthethi kuthi iingxaki zibangelwa nguye. (Yak. 1:13) Iingxaki ezininzi esinazo zibangelwa ‘lutshaba lwethu, uMtyholi.’ Ukanti, uThixo unokusebenzisa izinto ezibuhlungu ezisehlelayo zisincede ukomeleza ulwalamano lwethu naye. Uyayibona intlungu esikuyo, yaye ngenxa yokuba ‘esikhathalele,’ uyaqinisekisa ukuba oko kubandezeleka iba yinto nje ‘yokwethutyana.’ Ngaba uye uyiqonde into yokuba uYehova ukubek’ esweni xa usezilingweni, utsho ube nentembelo yokuba uya kukwenzela indlela yokuphuma?—2 Kor. 4:7-9.
UMVUZO OVELA KUYEHOVA
17. UYehova ukhangela abantu abanjani, ibe kutheni?
17 UThixo usibeka esweni kuba efuna ukubona abo bamthanda ngokwenene. Esebenzisa umprofeti uHanani, uYehova wathi kuKumkani uAsa: “Ngokubhekisele kuYehova, amehlo akhe asingasinga emhlabeni wonke ukuba ababonise amandla abo bantliziyo ziphelele kuye.” (2 Kron. 16:9) Nakuba uThixo engazange afumane ntliziyo ipheleleyo kuAsa, uya ‘kukubonisa amandla’ ukuba uqhubeka usenza okulungileyo.
18. Yintoni omele uyikhumbule ngoYehova xa uvakalelwa ukuba akukho mntu uzihoyileyo izinto ezintle ozenzayo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
18 UThixo ufuna ‘sifune okulungileyo, sithande okulungileyo size senze okulungileyo’ ukuze ‘asibabale.’ (Amosi 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) UYehova uyawabona amalungisa aze awasikelele. (INdu. 34:15) Ngokomzekelo, cinga ngabazalisikazi uShifra noPuwa ababengamaHebhere. Xa amaSirayeli ayengamakhoboka eYiputa, aba bafazi babini babesoyika uThixo ngaphezu koFaro, owayebayalele ukuba babulale zonke iintsana zamaHebhere ezingamakhwenkwe. Kuyabonakala ukuba ukoyika kwabo uThixo kwabenza bazisindisa ezo ntsana. UYehova wazibona izenzo zabo, waza wabasikelela ngokubanika ezabo iintsapho. (Eks. 1:15-17, 20, 21) Maxa wambi, sisenokucinga ukuba akukho mntu uzihoyileyo izinto ezintle esizenzayo, kodwa uYehova uzibona zonke, ibe uya kusivuza ngazo.—Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.
19. Omnye udade wafumanisa njani ukuba imigudu esiyenzayo ayilolize emehlweni kaYehova?
19 Omnye udade ohlala eOstriya wafumanisa ukuba imigudu yakhe ayilolize emehlweni kaThixo. Ekubeni eyinzalelwane yaseHungary, wanikwa iadresi yomntu othetha isiHungary entsimini. Wakhawuleza waya, kodwa wafika kungekho mntu. Wayequq’ ebuyelela kulo mzi, maxa wambi afike kuvakala ngathi ukhona umntu okhoyo, kodwa kungavulwa. Wayeshiya iincwadi, iileta neenombolo zakhe zefowuni. Emva kokuchitha unyaka onesiqingatha equq’ ebuyelela apho, wada wavulelwa! Wabuliswa linenekazi elinobubele, elathi: “Ngena. Ndizifunde zonke iincwadi neeleta zakho yaye bendikulindile.” Eli nenekazi lalinyangelwa umhlaza, labe lingenamdla wakudibana nabantu. Lavuma ukufundiswa iBhayibhile. UThixo wayivuza imigudu yalo dade!
20. Uvakalelwa njani ngokubekw’ esweni nguYehova?
20 UYehova ubona yonke into oyenzayo, yaye uya kukuvuza ekugqibeleni. Oku akumele kukwenze uvakalelwe ngathi ubusoloko ulandelwa ziikhamera ezifuna ukubona zonke iimpazamo ozenzayo. Kunoko, umele uzive usondele ngakumbi kuThixo onenkathalo nokuxhalabeleyo!
^ isiqe. 14 Ibali lobomi likaMzalwana uKlein lipapashwe kwiMboniselo yesiNgesi kaOktobha 1, 1984.